news The New Light of Myanmar, 23 May 2014 (7 years ago )
ဖဲမုၢ်ပျဲာ်အနံၤအူလၣ်မီၣ်ရွှ့ၣ်လၢကီၢ်ပယီၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဝဲၤလီၢ်ခၢၣ်သးစံးဝဲ,တၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်ထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအတၢ်ကွဲးနီၣ်ကွဲးဃါတဘ့ၣ် ဃီအဂီၢ်တၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးဝဲအါဘျီလံန့ၣ်လီၤ.တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးတၢ်အါဘျီအံၤကသူၣ်ထီၣ်တၢ်နာ်န့ၢ်လိာ်သးအါထီၣ်လၢခံခီယၢ်ပၤအဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲလၢတၢ်အိ...
news China Development Gate Way, 28 May 2014 (7 years ago )
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များမှအစိုးရနှင့်နောက်တစ်ကြိမ်ထပ်မံမတွေ့ဆုံမီဒုတိယမူကြမ်းနှင့်ပက်သက်၍နောက်ထပ်ဆွေးနွေးရန်အတွက်၎င်းတို့မှညီလာခံတွင်အတူတကွထပ်မံတွေ့ဆုံ ကြရန်စီစဉ်ကြသည်ဟုဗုဒ္ဓဟူးနေ့တွင်းပြည်တွင်းသတင်းမီဒီယာများမှဖော်ပြခဲ့သည်။ ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း၏ပြောကြားချက်အရလက်နက်...
news KIC News, 28 May 2014 (7 years ago )
ကရင်ပြည်နယ်လှိုင်းဘွဲ့မြို့နယ်ထိုင်းမြန်မာနယ်စပ်နှင့်၂ကီလိုမီတာကွာသောအူး​မူး​ထာ့​ရွာတွင်မေလ၂၅ရက်နေ့၌မြေမြှုပ်မိုင်းကြောင့်အသက်၆နှစ်အရွယ်မိန်းကလေးတစ်ဦးသေဆုံးကာရွာ သားငါးဦးဒဏ်ရာရခဲ့သည်။ဒဏ်ရာရသောရွာသားများသည်ယခုအခါထိုင်းနိုင်ငံဆေးရုံတွင်ဆေးကုသမှုခံယူနေကြပြီဖြစ်သည်။ ကရင်ကျန်းမာရေးနှင့်လူမှုဖူလုံရေးရ...
news Democratic Voice of Burma, 28 May 2014 (7 years ago )
news Irrawaddy News, 03 Jun 2014 (7 years ago )
RANGOON — Karen political parties, armed groups and civil society organizations meeting in eastern Karen State last weekend have reiterated calls for the creation ofafederal union, while offering support for Aung San Suu Kyi’s constitutional reform campaign. “The Karen’s political stance is to ...
news Karen News, 03 Jun 2014 (7 years ago )
The Karen National Union (KNU), in its controlled Hpa-an District has been implementingalow cost housing project for families of disable soldiers from its armed wing, the Karen National Liberation Army and displaced villagers in the surrounding areas. The housing project is taking place at two ...
news Irrawaddy News, 29 May 2014 (7 years ago )
ကညီကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်,ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်တဖၣ်,သူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်ကရူၢ်တဖၣ်ဒီးဂံၢ်ခီၣ်ထံးပှၤတဝၢတၢ်ကရၢကရိလၢအကယၤဂၤတဖၣ်ထံၣ်လိာ် အိၣ်ဖှိၣ်သကိးဖဲကညီကီၢ်စဲၣ်အပူၤဒ်သိးကပာ်တၢ်သးစဲသူၣ်ထီၣ်တၢ်ဃူတၢ်ဖိးလၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ကညီပှၤတဝၢအကျါန့ၣ်လီၤ. ပှၤ(၅၀၀)ဂၤ-(၆၀၀)ဂၤဟဲထီၣ်ဝဲဒၣ်ကညီတၢ်ဃူတၢ်ဖိးတၢ်ကူၣ်လိာ်တၢၣ...
news The New Light of Myanmar, 02 Jun 2014 (7 years ago )
ဒေသတွင်းလယ်သမားများထံယာယီစိုက်ပျိုးမွေးမြူရေးတရားဝင်လက်လက်မှတ်အမှန်များလွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနားကိုစနေနေ့တွင်တနင်္သာရီတိုင်း၏မြို့တော်ဖြစ်သောထားဝယ် မြို့ခန်းမတွင်လွှဲပြောင်းပေးအပ်ခြင်းအခမ်းအနားကျင်းပပြုလုပ်သည်။ အခမ်းအနားတွင်အမှာစကားပြောကြားသောတနင်္သာရီတိုင်းဝန်ကြီးဦးမြတ်ကိုမှယာယီစာရင်းဇယား...
တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်များနှင့်နိုင်ငံရေးအချီချဆွေးနွေးပြီးနောက်ပိုင်းမှသာဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေပြောင်းလဲသင့် - ဦးသိန်းစိန်
news Irrawaddy News, 02 Jun 2014 (7 years ago )